Murcanyo waa magaalo xeebeed ku taal waqooyiga bari gobolka Bari ee Soomaaliya . Waxay ku taalaa maamul goboleedka Puntland .
Murcanyo waa magaalo xeebeed ka tirsan degaanka Caluula, boosaaso waxay u jirta 79 mayl (127km), waa magaalo qadiimi ah. Sannadkii 1872 waxaa magaalada degenaa dad lagu qiyaasaayay 600-700 oo qof. Magaalada waxaa xilligaa xukumi jiray Suldaanada Majeerteen. Magaalada Waxay lahayd afar masaajid. Murcanyo waa tuulo si xawli u kortay, waxaana ku badan qabiilka reer Faatax, Yuusuf Suldaan.
Magaalada waxaa la asaasay qiyaastii [[1780[[ -1790 waxaa tiirkii ugu horeeyay ka taagay Faatax Faahiye oo u dhashay beesha Yuusuf Suldaan ee Cusmaan Maxamuud.
Markii ugu horaysay magaaladda waxa uu ka qoday ceelka-caanka ah ee Tiyeega, isaga sidoo kalena xaliyay khilaaf ka jiray dhanka Xijiyadda waxa uuna xad u sameeyay xijiyada ku yaalay buuraha sare ee Murcanyood. Xijiga oogu badan meesha Waxaa iska leh Beesha reer Faatax
Faatax Faahiye Wuxuu soo dhaweeyey Boqortooyadi ka talin jirtey deeganada bari oo uu deegaan ka siiyey magalada murcanyo. Xooladhaqatada ku heerarsan magalada Murcanyo waa Beesha Reer Faatax, Cismaan Maxamuud.
Waxay noqotay magaalo ganacsi waxaa usoo guuray dad badan gaar ahaan
Murcanyo tartiib tartiib ayay usoo waynaatay waxaa bilaamay safaro ka imanaya carabta doonleyda reer Yamaneed ah oo badeecado keensanaayaan Murcanyo
Murcanyo waxa ee yeelatay meelo fardaha caws loogu beero qayb kamid ah neh tababar lagu qaato, xiliyadaas waxaa bilaamayay colaado sokeeye oo Soomaliya ka jiray
Markii lasoo gaaray dhamaadkii qarnigii 19 aad iyo bilawgii kii 20 aad waxay Murcanyo ahayd dhulkii ugu fiicnaa xaga dhaqaalaha degenaanta iyo magac ahaanba dhulkii majeerteenya la oran jiray.
Markii uu bilaamay halgankii Sayid Maxamed Cabdulle Xasan waxay ahayd meelahii uu ku xusay geeraaradiisa midkood.
Bishii Abriil 8, 2014, dawladda Puntland waxay ku dhawaaqday abuuritaanka iskaashi goboleed cusub oo lala yeelanayo magaalada Murcanyo iyo Raas Caseyr, iskaashi goboleedkaas oo loo magacaabay Gees Gardafuul, waxayna ka kooban tahay 4 degmo. Xaaji Xaaji Dhagaweyne Boss ayaa dowlad goboleedka u magacaawday in uu noqdo duqa degmada murcanyo, wuxuuna abuuray golaha degmada. Waxaa jira 9 tuulo hoostaga degmada murcanyo oo kala ah:
Gars, Qajawe, Dhurbo, Galgala Geesaley, Xaabo, Tayeega, Hoodaa, Haqeyn.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Murcanyo&oldid=211684"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 12 May 2021, marka ee eheed 17:52.